Ihe omuma ihe omumu nke akwukwo ihe omumu nke ulo oru SEO audit
Search Engine Optimization (SEO) Nyocha nyochaa ma ebe nrụọrụ weebụ bụ SEOenyi na enyi na nsogbu ndị dị mkpa. Ọ na-achọpụta na saịtị ahụ kachasị mma maka mgbanwe niile na-ewere ọnọdụ na ụlọ ọrụ ahụ.SEO Audit na-agụnye teknụzụ, na-na peeji nke, anya-na peeji nke, asọmpi na nnyocha nyocha.
Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, Jack Miller na-akọwa ihe SEO nyocha, otu esi agba ya na ihe mere o ji dị mkpa maka nkwalite weebụsaịtị.
Ihe dị mkpa nke SEO Audit
Ozugbo Google na-edozi ogo algorithms na ọdịnayaihe ndi choro, ulo oru choro nzaghachi na mgbanwe a ngwa ngwa ka ha wee di ike. Nnyocha nyocha na-enye gị ohere iwelie saịtịeleta ma nyere aka n'inwe usoro mmepe nke ulo oru. Ọ na-abịa na njide mgbe ị na-achọ ịmalite ọrụ ọhụrụ.
Accessibility Ebe nrụọrụ weebụ ga-enwe ọdịnaya na search engineskwesịrị ịnweta ya. Ị daa na nzọụkwụ a, engine search agaghị enwe ike ịmalite ọdịnaya gị, nke ga-emetụta nsogbuogo. Otú ọ dị, ngwá ọrụ Robots.txt nwere ike idozi nsogbu dị otú ahụ n'ụzọ dị mfe site na iji pinpointing ọ bụla peeji nke a gbochibidoro ịgba. Ọ gụnyerenyocha nke nyocha ọnọdụ HTTP. N'ihe banyere canonicalization (mbipute mbipute nke abụọ), nyocha nke nyocha na-enyere aka redirect duplicatedpeeji nke mbụ. A ga - enyocha ibe niile iji jide n'aka na ọ dịghị onye na - anọgide na - anọpụ iche na - agba agba agaghị agbahapụ ha.
Indexation Ịlele nnweta nwere ike ịhụ na engines ọchụchọchọta ọdịnaya. Ọnụ ọgụgụ dị elu nke ibe ndị achọtara na ntinye ọdịnaya ahụ na-eme ka ọnụ ọgụgụ saịtị ahụ dịkwuo elu, nke na-eme ka ọnọdụ ahụ dịkwuo mmanhazi.
Ọrụ Ụlọ Ọrụ Ọsọ ọsọ nwere ikedị ka ọtụtụ ndị mmadụ na-agaghị echere ka ibe ha jupụta ma ọ bụrụ na ọ na-ewe ogologo oge ma jiri njikọ Ịntanetị nwayọọ nwayọọ. Ọ na-emetụta ọnụọgụ nleta ndị nlele..
Na-ebupụ SEO Audit
Ndị ọkachamara SEO, dị ka ụlọ ọrụ anyị, na-eme nchọpụta zuru oke na iji ngwaọrụna ngwa. Na-enyocha akụkụ ọ bụla nke saịtị ahụ, ha na-akwadebe akụkọ na-akọwa ụdị nsogbu niile ha chọtara, ma nye ha arona esi ewelata nsogbu ahụ.
ngwaọrụ akụrụngwa maka SEO Audit
E nwere ụfọdụ ngwaọrụ maka iduzi SEO nyocha. Ha na-ewe oge,n'ihi ya, ọ chọrọ ndidi, nzi ezi, na iche echiche eche echiche. Nhọrọ a bụ maka ndị nwere obi ike na-eji nkà na ụzụ eme ihe ike.
Ngwaọrụ maka Nka na ụzụ
Frog Frog ma ọ bụ Xenu Ha na-elele nọmba nke edepụtarapeeji nke, ịchọta nchọpụta aha, redirects intern, and duplication.
IIS SEO Toolkit Ọ na-enyocha nnweta nke saịtịna-atụ aro ka esi eme ka ọ dịkwuo ntanetị nwere ike ịnweta ahụ.
Ọkachamara Ọrụ Ntanetị Ndị ọkachamara nyochaa ma teknụzụna ọdịnaya dị na arụmọrụ SEO gị na saịtị, nye gị akụkọ na nkwenye.
Pingdom DNS Check Na-enyere aka na njehie njehie, ahụike DNS, na nchọpụta nsogbu nhazi ntọala DNS
Onye mebere ya Nyochaa ihe owuwu nke ngalaba na akụkọ banyere usoro ihe gbasara SEO.
GTmetrix Ngwaọrụ nke na-egosipụta ihe ndị na-eme ka ebe nrụọrụ weebụ dịeji ngwa ngwa. Ọ na-agụnye ọsọ ọsọ akụkọ ihe mere eme ma ọ bụrụ na eji ya eme.
Google Webmaster Tools Na-achọpụta nsogbu dị na peeji nke,njikọ na nlekọta ahụike nke weebụsaịtị.
Mgbe ị na-eduga nyocha SEO nke weebụsaịtị, jide n'aka na a tụlere ihe niile.Ihe mgbagwoju anya na ihe omuma nke ime nchoputa bu isi ihe ndi n'eme ka oganihu nke oditi. Na-abanye naesi na multifactorial analysis, ị nwere ike ịzụlite usoro SEO ziri ezi maka nkwalite mgbasa weebụ gị ọzọ.